Inweta gị na saịtị International na Search | Martech Zone
Anyị enweela ihe ịma aka na ihe ọchị nke isoro ndị ahịa ole na ole na-arụ ọrụ na ndụmọdụ iji were saịtị ha mba ofesi mgbe abiara SEO. Anyị nwekwara ndị ahịa ndị ọzọ achọghị ibuli elu mba ụwa mana ha na-enweta ọtụtụ ahịa mba ofesi. Inweta igwe ihe nchoputa dika Google ka ghota ebumnuche gi maka ime obodo ma obu ihe omuma nke uwa adighi nfe ka idobe mba a choro na Webmasters… o gha ewe otutu oru.
O wutere ya bu SEO mba ndi ozo anyi weputara ka anyi na ndi ahia anyi nye oru ma ha nye anyi ezigbo ndumodu na anyi nwere ike igbanwe nsonaazụ nke 3 nke ndi ahia anyi. Gbasaa na-adịbeghị anya mere a ngosi na nyocha data maka iwebata saịtị gị mba ofesi.
Fọdụ n'ime nchoputa:
Ngalaba ọkwa elu ụwa rụọ ọrụ nke ọma karịa subdomains ma ọ bụ folda nchekwa. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnọ n'Italytali, nweta ngalaba gị na .it Nkeji
Asụsụ igwe ntụgharị asụsụ bụ adịghị arụ ọrụ. Naanị jụọ otu onye ahịa m ji okwu ahụ mee ihe so site na ntughari igwe Russia c o nwere obere nsogbu na otutu mgbaghara.
inwe adreesị mpaghara (ime ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ) na nọmba ekwentị dị na saịtị ahụ.
inwe njikọ njikọ mpaghara na saịtị ahụ bụ isi na-adịghị ike.
inwe njikọ mpaghara inbound na saịtị ahụ abụghị ihe dị mkpa ma ọ bụ… ikike inbound kacha mma dị mma karịa mpaghara.
ele ihe ihe ngosi si Hannah Smith. A ga-ewepụta data sitere na nyocha Distilled.
Tags: Tụọ CP
Ndi Mmepe Soro n’ego ahia ahia gi?